Ampidino Advanced SystemCare ho an'ny Windows
Maimaimpo Ampidino ho an'ny Windows (48.00 MB)
Ampidino Advanced SystemCare,
Aminny alàlanny fampidinana Advanced SystemCare, dia hanana programa fanatsarana rafitra izay anisanny programa mahomby indrindra aminny fikojakojana ny solosaina sy ny fanafainganana ny solosaina.
Ahoana ny fametrahana ny Advanced SystemCare?
Advanced SystemCare, izay rindrambaiko azonao sintonina sy atombohy ampiasaina maimaim-poana aminny solosainao, dia fitaovana fanatsarana rafitra izay misy fitaovana ilaina maro samihafa azonao ampiasaina hamelomana ny solosainanao, izay nanomboka niasa tsimoramora rehefa mandeha ny fotoana, rehefa avy mampiasa azy mandritra ny fotoana fohy ary mamerina azy aminny toetrandro voalohany. Advanced SystemCare dia ahafahanao manao asa sarotra sy fikolokoloana sarotra aminny tsindry vitsivitsy monja.
Anisanireo fitaovana fikojakojana sy fanatsarana ao Advanced SystemCare ny fitaovana manampy aminny fanitsiana ny lesoka aminny firaketana sy ny fanadiovana ireo rakitra tsy misy dikany. Ny lesoka toy izany sy ny rakitra tsy ilaina dia mahatonga ny rafitra fiasanao hisokatra sy hikatona tara, ary hihemotra aminny baiko ny solosainanao. Miaraka aminny Advanced SystemCare, azonao atao koa ny manao defragmentation disk sy defragmentation aminny rezistra. Aminizany fomba izany dia mitombo koa ny fahombiazanny kapila.
Ahoana ny fomba hanafainganana ny solosaina aminny Advanced SystemCare?
Ny Advanced SystemCare dia manome ny mpampiasa fotoana ahafahana mandray fepetra fiarovana ankoatry ny fanafainganana ny fanombohana Windows sy ny fanafainganana ny asanny Windows. Fitaovana fiarovana ny Browser ao aminny Advanced SystemCare dia manome vahaolana aminny fanesorana ireo plug-in misy browser ary hisorohana ny fanovana ny pejy fandraisana. Raha toa ka nalainny rindrambaiko sy add-ons anny antoko faha-3 tsy ilaina ianao dia azonao atao ny mampiasa ireo fitaovana ireo ary manatanteraka ny fanoloana pejy fandraisana. Advanced SystemCare dia manara-maso tsy tapaka ny mpanamory anao ary manakana ny fanovana tsy ara-dalàna ny pejy fandraisana sy ny motera fikarohana misy anao.
Miaraka aminny Advanced SystemCare, azonao atao ny manala ireo soritry ny fitetezana Internet anao. Azonao atao ny manamboatra ny programa hamafana ho azy ny soritry ny tsiambaratelo rehefa mikatona ny Internet-nao.
Ny Advanced SystemCare dia misy koa fizarana Toolkit izay manamora ny fidirana aminireo fitaovana ilaina hafa novolavolaini IObit. Ny fizarana Turbo Power ao aminny Advanced SystemCare dia ahafahanao mampitombo ny fahombiazanny solo-sainao aminny lalao na aminny fampiharana arakizay ilainao. Ity fitaovana ity dia manamarina ny serivisy sy ny serivisy antoko fahatelo ao aminny Windows, mamarana ireo tsy manandanja ary manome loharano bebe kokoa aminireo rindranasa na lalao iasanao. Araka izany, miasa sy milamina kokoa ireo lalao sy fampiharana ireo ary voasoroka ny fihenanny fampisehoana.
Inona no Vaovao aminny Advanced SystemCare 13
Fiarovana aminny mailaka (Vaovao): manakana ny rohy sy tranonkala mampidi-doza ao aminny mailakao ho anny Gmail, Outlook ary Yahoo Mail ao aminny Internet Explorer, Firefox, Chrome ary Edge.
Fanombohana fanombohana: (Nihatsara) Atsaharo ny entana bebe kokoa aminny fanombohana miaraka aminny tahiry data farany.
Software Updater (Nohatsaraina): programa vaovao 60 isan-jato vaovao manohana fanavaozana mora foana.
Sakano ireo programa tsy azo antoka (nohatsaraina): Fanohanana hanakanana ireo programa aminny anaranny orinasa
Fanohanana aminny fiteny tiorka.
Fifanarahana mahomby sy ilaina.
Manolotra fitaovana matanjaka ho anny fanatsarana ny rafitra.
Haben'ny rakitra: 48.00 MB